ဘဝသစ်: Building M&E Systems တွေရဲ့ Scope (နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ)
....................ကြွရောက်လာသော မိတ်ဆွေအပေါင်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်...................
Building M&E Systems တွေရဲ့ Scope (နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ)
M&E Systems တွေရဲ့ နက်နဲသိမ်မွေ့မှု အတိမ်အနက် ဟာ ဒေသရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ ရာသီဥတု အခြေအနေ နဲ့ နေထိုင်သုံးစွဲသူ အမျိုးအစား နဲ့ အဆောက်အအုံ ရဲ့ အဆင့်အတန်း တွေပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့်
ရာသီဥတု သမမျှတတဲ့ နေရာက အိမ်တွေမှာ အပူပေး စံနစ်ရော၊ အအေးပေး စံနစ်ပါ လိုချင်မှ လိုပါမယ်။ ဘယ်လို အဆင့်အတန်း ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ့လေ။
ကုန်တွေ အများကြီး လှောင်တဲ့ ဂိုထောင် အကြီးစားတွေ မှာဆိုရင်လည်း အပြင်မှာ ရေခဲနေအုံးတော့ အပူပေးစံနစ် လိုချင်မှလိုပါမယ်။
ခေတ်မီဆေးရုံ တွေမှာ ဆိုရင်တော့ လက်ရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စံချိန်စံညွှန်း တွေနဲ့အညီ ဆေးရုံသုံး ဓါတ်ငွေ့တွေ၊ အရံ လျှပ်စစ်မီး ပေးစံနစ် (အရေးပေါ် မီးစက်) တွေ၊ ဆက်သွယ်ရေး စံနစ်တွေ အစရှိသဖြင့် ပါဝင်ရ ပါတယ်။
သာမန်ရုံးခန်း အသေးလေး တွေမှာ Window Type, Split Type Air Conditioners (လေအေးစက် အသေးစား လေးတွေ) သုံးလို့ ရပေမဲ့ Intelligent High-rise office building (အထပ်မြင့် အဆင့်မြင့် ရုံးခန်း) တွေမှာတော့ building automation and management control (အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ရေး နဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး စံနစ်တွေ) ပါဝင်ပြီးဖြစ် တဲ့Central HVAC system (ပင်မစက်ခန်း ကနေ ခွဲဝေ ပေးရတဲ့ HVAC စံနစ်) တွေကို ဒီဇိုင်းလုပ်ရ ပါလိမ့်မယ်။ M&E Systems ဆိုတာ ဘာတွေလဲလို့ အရင် Post မှာ တင်ပြခဲ့ ပြီးပါပြီ။
အရေးကြီးတာ ကတော့ Scope တွေ သတ်သတ် မှတ်မှတ် ခွဲနိုင်ဘို့၊ Demarcation Point တွေ ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြ နိုင်ဘို့ ပါ။ ဒါမှ ဘယ်ဟာက ဘယ်သူ့ တာဝန်၊ ဘာတွေက Contract ထဲမှာပါတယ် စသည်ဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်နိုင်မှာပါ။ ဒီ Scope of Work တွေပေါ် မူတည်ပြီး မှသာ Budget (ဘတ်ဂျက်) ကို အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း တွက်ချက် နိုင်မှာပါ။ Project အသစ်တစ်ခု မစခင် M&E Feature & Design Criteria (ပါဝင်ချင်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေ နဲ့ ဒီဇိုင်း စံညွှန်း )တွေကို လျာထားဘို့ အသေးစိတ် Check List တွေ အရင် လုပ်ရပါတယ်။ Check List တွေ ပေါ်မူတည် ပြီး Architect/Engineer တွေ ဟာ ဘတ်ဂျက်တို့၊ နေရာ အထားအသိုတို့ကို လျာထား၊ ပြီးတော့ Architectural Concept တွေ ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နိုင်မှာပါ။
အောက်မှာ ဒီလို Scope တွေ ကို ခွဲဘို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ Check List (အချက်အလက်) တွေ စာရင်းပြုစု ဖော်ပြ ပေးထား ပါတယ်။
Project ရဲ့ တည်နေရာ၊ နိုင်ငံ၊ ပြည်နယ်၊ မြို့ ၊ လမ်း၊ အစရှိတဲ့ အခြေခံ ကိုသိရပါမယ်။ ဒါမှ ဆက်စပ်တဲ့
Climate Conditions ရာသီဥတု အခြေအနေ။
Rules & Regulations Codes of Practices / Bylaws သက်ဆိုင်ရာ ဒေသရဲ့ လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ၊ သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေ တွေ၊ ( အများပြည်သူ ကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘို့၊ မထိခိုက်စေဘို့၊ အဓိကရည်ရွယ် တဲ့ ဥပဒေတွေ)
Infrastructure တွေ ကရော ဘာတွေ အဆင်သင့်ရနိုင်လဲ။
Materials & Equipments ရော အဆင်သင့်ရနိုင်ရဲ့လား၊ နိုင်ငံခြားက သွင်းရဘို့ လိုမှာလား။
Economic Prospect / Political Situation စီးပွားရေး အခွင့်အလန်းရှိ ရဲ့လား၊ နိုင်ငံရေးအခြေ အနေကရော ၊ ငွေကြေး ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကရော ဘယ်လိုရှိသလဲ။
Local Operation ကရော၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ လူခံ၊ ရှိပြီးသားလား။ ဘယ်လိုစတင်ရမှာလဲ
ပညာရှင် နဲ့ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား တွေရော အဆင်သင့် ရနိုင် ရဲ့လား
ဒီ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေပေါ်မူတည်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်တွေ နဲ့ အခွင့်အလန်း တွေကို ခန့်မှန်းလို့ ရမှာပါ။
Building M&E System တွေရဲ့ Scope ကိုသတ်မှတ်တဲ့ အခါ ပထမဆုံး သိသင့်သိထိုက် တာကတော့ Infrastructure တွေအကြောင်း ပါ။ Infrastructure ဆိုတာ အဆောက်အအုံ နေရာရဲ့ လိုအပ်ချက်အတွက် တည်ဆောက်ထားလို့ အဆင်သင့် ရှိနေ တတ်တဲ့ Site Utilities တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ အဆောက်အအုံ အတွက် လိုအပ်တဲ့ သောက်ရေ သုံးရေ၊ လောင်စာဓာတ်ငွေ့၊ လျှပ်စစ်မီး၊ တယ်လီဖုန်း၊ Data နဲ့ Cable TV တွေ သွယ်ယူဘို့ စနစ်တွေ။ မိုးရေ နဲ့ ရေဆိုး (မိလ္လာ) နဲ့ အမှိုက်တွေ စွန့်ထုတ်ဘို့၊ အစ ရှိတဲ့ စနစ်တွေပါ။ ဘယ် စနစ်တွေက အဆင်သင့် ရှိနေတယ်။ ဘယ် Autority (ဌာန ဆိုင်ရာ၊ အာဏာပိုင်)၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း က လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသလဲ အရင်ဆုံး လေ့လာရပါမယ်။ စည်ပင်သာယာ တို့၊ လျှပ်စစ်ဌာန တို့၊ ဆက်သွယ်ရေး တို့လို၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း တွေ၊ Telephone, Internet Service Providers နဲ့ Cable TV Providers အစရှိတဲ့ ကုမ္ပဏ္ဏီကြီးတွေ က ဝန်ဆောင်မှု ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဆောက်အအုံ ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ခန့်မှန်း တွက်ချက် ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဌာန ဆိုင်ရာတွေနဲ့ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြီး Approval (သဘောတူညီချက်၊ အတည်ပြုချက်) ရယူ ရလေ့ရှိ ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အဆောက်အအုံ ဆောက်ပြီးတဲ့ အခါ အဆင်သင့် အသုံးပြု နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Infrastructure တွေသာ မရှိရင် Deep Well ရေတွင်း (အဝီစိတွင်း) တူးရတာ တို့၊ ပြီးရင် Water Treatment ရေသန့်စင်ရတာတို့၊ Waste Water Treatment Plant (မိလ္လာကန်) ဆောက်ရတာ တို့ နဲ့ ရှုပ်ရှက် ကို ခပ်နေပါ လိမ့်မယ်။ နောက်လျှပ်စစ်မီး အတွက်တွေ၊ ဆက်သွယ်ရေး နဲ့ အခြား လိုအပ်ချက်တွေကို လည်းထည့် စဉ်းစားရ ပါလိမ့် အုံးမယ်။
Domestic Water Supply သောက်သုံးရေသွယ်ယူဘို့ပါ။ ရနိုင် မရနိုင်နဲ့ လက်ရှိ ပိုက်လိုင်းက ဘယ်နားမှာ ရှိတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဘယ်နေရာကနေ ခွဲယူရမယ် စုံစမ်း ထားရပါတယ်။
Non-potable Water Supply သောက်ရန်မဟုတ်သော သုံးရေပါ။ အစားအသောက် အတွက် မဟုတ်တဲ့ Industrial Water (စက်ရုံသုံးရေ) ကိုဆိုလိုပါတယ်၊ သောက်ရေမဟုတ်တဲ့ Cooling Tower / Fire Fighting Sprinkler Systems / Irrigation Systems တွေမှာ သုံးဘို့ ရေပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံက NEWater လိုရေမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
Foul Water (Sewerage) Discharge မိလ္လာ၊ ရေဆိုး စွန့်ထုတ်ဘို့ပါ။ Infrastructure ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ Public Sewer Lines တွေအဆင်သင့် ရှိနေလေ့ ရှိပါတယ်။ စွန့်ထုတ်မဲ့ ရေရဲ့ Allowable Limits (ဓါတု ဇီဝ ပါဝင်မှုနှုန်း ကန့်သတ်ချက်) တွေကတော့ ရှိလေ့ ရှိပါတယ်။ မိလ္လာ၊ ရေဆိုး တွေကို အနီးစပ်ဆုံး နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး Public Manhole အထိ သွယ်ထုတ်ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် စစချင်း မဟုတ်တောင် Detail Design မစခင် Public Manhole ရဲ့ အတိမ်အနက် နဲ့ Direction of Public Sewer Lines ကိုသိနေဘို့ လိုအပ် ပါတယ်။
Storm Water Drainage Discharge မိုးရေ ကိုစွန့်ထုတ်ဘို့ အတွက် စနစ်တကျ တွက်ချက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရေနုတ်မြောင်းတွေ
Refuse Disposal အမှိုက် စွန့်ပစ်ရန်စနစ်၊ အများအားဖြင့်တော့ Municipal စည်ပင်သာယာ ကလာသိမ်းပေးတတ်ပြီး တစ်ချို့နိုင်ငံ တွေမှာတော့ အစိုးရက ခွင့်ပြုထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေကတာဝန်ယူလေ့ ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် အမှိုက်တွေ ကို Incinerator တွေ ကိုပို့၊ မီးရှို့၊ ထွက်လာတဲ့ ပြာတွေကို Land Fill မြေဖို့ ဘို့ အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
Town Gas Supply ချက်ပြုတ်ရန် ဂက်စ် ကိုဘယ်လိုရနိုင်မှာလဲ။ ပိုက်နဲ့ပေးတာကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရနိုင်တယ် လို့တော့မထင်ပါနဲ့။ Town Gas Supply Companies တွေကလည်း သူတို့ပိုက်လိုင်း အနီးအနားမှာ အဆင်သင့်ရှိနေတာ တောင် မှ စီးပွားရေး အရ ရေရှည် တွက်ခြေကိုက်မကိုက် တွက်ချက်ပြီးမှ ပိုက်လိုင်းကို အဆောက်အအုံအထိ ဆက် Install လုပ်ပေးတာပါ။ အမျိုးအစားကရော ဘာလဲ [ CNG, SNG, LPG (Liquefied Petroleum Gas ), LNG (Liquefied Natural Gas)] အစရှိသည်..
Chilled Water / Steam တစ်ချို့ နိုင်ငံတွေမှာ District Cooling / Heating စနစ်တွေ ရှိနေ တတ်ပါတယ်။ ပြီးမှ Chilled Water / Steam ကို ဖြန့်ဝေပေး တာကို Subscribe လုပ်ရုံပါပဲ။ အားသာချက်ကတော့ Plant Space နေရာ သက်သာ သွားတာပါ၊ Cooling Towers, Boilers, Chillers စတာတွေ မလိုတာမို့ အသံဆူညံမှု ကို ထိန်းရတာ လည်း ပိုလွယ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး တွက်ခြေ ကိုက်၊ မကိုက် ကတော့ Life Cycle Cost နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ရမှာပေါ့လေ။
Electrical Power လျှပ်စစ်မီး၊ ပါဝါ ကိုလျှောက်တဲ့ အခါ အနီးစပ်ဆုံး ပါဝါလိုင်း က ဘယ်မှာလဲ။ Voltage က HT (High Tension) / Medium Voltage လား LT (Low Tension) လား၊ ဘယ်နှ ဗို့အားတွေ ရနိုင်လဲ။
ဗို့အား အမြင့် ကိုသုံးရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဗို့အား ရဘို့အတွက် Transformers လိုပါတယ်။ နောက် Power Company's အတွက် Switch Gear ထားဘို့ အခန်းနေရာ ဆောက်ပေးရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ ဗို့အား (ဥပမာ အိမ်သုံးဗို့အား) တန်းရနိုင်ရင် Transformers မလိုပါဘူး။ နေရာလည်းသက်သာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Tariff ယူနစ်တစ်ခု (per VA) အတွက် ကုန်ကျငွေတော့ ပိုနိုင်ပါတယ်။ Power Company's ရဲ့ပေးနိုင်တဲ့ ဗို့အားက က ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Load/ Maximum Demand ပေါ်မှာ လည်း မူတည် တာမို့ ကိုယ်လိုချင် သလို ပေးမှာ တော့ မဟုတ်ပါဘူ။ Negotiation တော့ အနည်း နဲ့ အများ လုပ်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။
နောက် ပိုစိတ်ချချင် Source နောက်တစ်ခု ရနိုင်၊ မရနိုင် (ငွေတော့ပိုကုန်မယ်)။ Power Company's တွေက ထုံးစံ ဖြစ်တဲ့ Maximum Demand vs Source Voltage Schem နဲ့ သူတို့ ပေးနိုင်တဲ့ Power Quality ကိုလည်း ဖော်ပြလေ့ ရှိပါတယ်။ မီးအားမမှန် ရင်၊ မီးပြတ်ရင် ပြည်သူတွေရဲ့ စီးပွားရေး သာမက နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ပါ ထိခိုက်မှာမို့ တိုးတက်လိုတဲ့ နိုင်ငံတိုင်း မှာ လိုအပ်တဲ့ ပါဝါပေးနိုင်အောင်၊ မီးမပြတ်ရ အောင်နဲ့ မီးအားမှန်အောင်ပါ လုပ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ အပြန်အလှန် အားဖြင့် မီတာခ တွေ ကောက်ယူ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌာန ဆိုင်ရာ အသုံးအစွဲ ကိုလည်း လိုတာထက် ပိုမသုံးအောင် ဘတ်ဂျက်ပေးပြီး ချင့်ချိန်ကြရပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံ မှာ ဆို Federal Government’ s Agencies တွေရဲ့ Energy Consumption ကိုလျှော့ချဘို့ နဲ့ Energy Efficient ဖြစ်ဘို့ Federal Energy Management Policy ကိုချမှတ် ထားပြီး ဒီစနစ် ရဲ့ထိရောက်မှု နဲ့ အကျိုးရှိမှု ကို သမတ ကိုယ်တိုင် ကွန်ဂရက် မှာ တင်ပြရပါတယ်။
Telecom / Data / Internet တယ်လီဖုန်း၊ အင်တာနက်၊ အချက်အလက်။ အခုခေတ် အဆောက်အအုံ တွေမှာ IT လိုအပ်ချက် ကများသည်ထက် များလာပါတယ်။ Telephone Service Providers တော်တော်များများ က လိုအပ်ချက် ကိုဖြည့်ဆီး ပေးနိုင် အောင် Infrastructure တွေကို အဆက်မပြတ် ပြင်ဆင်မွန်းမံ နေကြပါတယ်။ လိုအပ်ချက်ကို ကြည့်ပြီး Telephone Service Providers တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းယူရပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ တယ်လီဖုန်း၊ Data အတွက် Cables တွေသွယ်ယူ နိုင်ဘို့ သာမက Cell Phone တွေအတွက် Signal Boosters တွေပါ တတ်ဆင်ပေး ဘို့ရယ်။ လိုအပ်တဲ့ အခန်းနေရာ နဲ့ Power / Air-con လိုအပ်ချက် တွေကိုပါ ညှိနှိုင်းယူရ ပါတယ်။
Cable TV ကေဘယ် တီဗီ အတွက် ပါ။ ခုနောက်ပိုင်း IT နည်းပညာ တိုးတက်လာတာ မို့ Telephone Service Providers က Cable TV ပေးနိုင်လာ သလို Cable TV Providers ကလည်း Telephone/Internet Service ပေးနိုင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရှုတ်ထွေး နေတာပါပဲ။
Alternative Energy Source (Fuel: Coal) စွမ်းအင်အတွက် အခြားရွေးစရာရှိ မရှိ ( Gas, oil, electrical power, coal, central (steam, hot water, chilled water), alternative energy, etc. )
စင်္ကာပူ လို နိုင်ငံမှာ တော့ ကိုယ့် Project ရဲ့ အနီးတစ်ဝိုက် မှာ ရှိနေတဲ့ Existing Infrastructure Utilities Plan ကို သက်ဆိုင်ရာ PUB (Public Utilities Board) ကနေဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ မလေးရှား နိုင်ငံမှာ တော့ ဒီ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေဆီ ချဉ်းကပ် ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို မျက်စေ့မှိတ် ယုံရမှာ တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ့် အပြင်မှာ ရှိနေတာတွေကို Verify (ပြန်စစ်ဆေး အတည်ပြု) လုပ်ရပါတယ်။
ဒီ Infrastructure တွေကို ရအောင် လျှောက်တဲ့ အခါ ကုန်ကျမဲ့ Application Fees / Connection Fees (လျှောက်လွှာကြေး၊ မီတာကြေး၊ ဘာကြေး ညာကြေး တွေ) ကို Client / Owner ကနေကျခံ ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း Scope of Works မှာ Demarcation ထည့်ရေးထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Demarcation ဆိုတာက တာဝန် ကို တိတိကျကျ ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားတဲ့ နယ်နမိတ် (ဝါ) စည်း ကိုဆိုလိုပါတယ်။
Environmental Features ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေ။
ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ဆက်နွယ် နေတဲ့ အချက်တွေ ပါ၊ မပါ စစ်ဆေးနိုင် ဘို့ပါ။ ဒီအချက်တွေ ကတော့၊
Green Building : Green ဆိုတာက တော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ရေရှည် ဂရုစိုက် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နိုင်စွမ်းတဲ့ sustainable development ကို ဆိုလို ပါတယ်။ စီးပွားရေး အရလည်း တွက်ခြေကိုက်ပြီး၊ နေထိုင်သုံးစွဲသူ တွေ အတွက် လည်း ကျန်းမာရေး နဲ့ ညီညွတ် စေမယ့် အဆောက်အအုံ တွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးက မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာတာမို့ လက်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေး မှာ အရေးပါ လာတဲ့ အချက်တစ်ခု ပါပဲ။ ဒီ အဆောက်အအုံ တွေရဲ့ အကျိုးရှိမှု ကို Life Cycle Cost နဲ့ တိုင်းတာ တာမို့ Initial Cost ပို သက်သာ လေ့တော့ မရှိပါဘူး။ Green Building Certification Process တွေပါ လိုအပ် ခဲ့ရင်တော့ Project Schedule & Project Duration တွေပေါ်မှာ သက်ရောက်တဲ့ Impact ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Indoor Environmental Conditions အဆောက်အအုံ အတွင်းပိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်
Temperature အပူအအေး ထိန်းသိမ်းရမဲ့ လိုအပ်ချက်။ ဥပမာ 23±1.1ºC, 75±2ºF etc.
Relative Humidity စိုထိုင်းဆ လိုအပ်ချက်။ ဥပမာ RH 55±2.5%
Pressure Cascading (Positive, Negative, Pa) လေ၏ ဖိအား ဇုန်သတ်မှတ်ချက်
Acoustic Criteria (dbA, NC) အသံ ဆူညံမှု သတ်မှတ်ချက်
Lighting (Lux Level) အလင်းရောင် အား
Air Cleanliness လေ၏ သန့်ရှင်းမှု အတိုင်းအတာ
Vibration Criteria တုန်ခါမှု အတိုင်းအတာ
ဒီလိုအပ်ချက် တွေ ဟာ သာမန် ရုံးခန်း တွေမှာ သိပ်ပြီး တင်းကျပ် လွန်းမှာ မဟုတ်လှ ပေမဲ့ High-Tech Factories တွေလို Stringent Indoor Environmental Conditions တွေ လိုအပ် လာတဲ့ အခါ Design Process တွေရော Control Strategies တွေပါ ပိုမို ရှုတ်ထွေးလာ တာ တွေ့ရပါမယ်။ ဥပမာ Temperature နဲ့ RH Control နှစ်ခုလုံး ဘောင်အတွင်း ဝင်ဘို့ ထိန်းရတာ အတော်ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် TDB 75±2ºF, RH 55±2.5% ရနိုင်ဘို့ဟာ TDB 75±5 ºF, RH 55±5% ရဘို့ထက် အဆပေါင်း များစွာ ပိုမို ခက်ခဲ ပါတယ်။
Air Cleanliness ကိုသေချာ ထိန်းသိမ်းဘို့ လိုအပ် တဲ့ Cleanrooms (High-Tech Fabs / Bio) တွေ မှာဆိုရင် လည်း သူတို့ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ Air Cleanliness Class ကိုသိ ရဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Natual Ventilation (သဘာဝ လေဝင် လေထွက်)
Daylighting (နေ့ အလင်းရောင် အသုံးခြခြင်း။)
Solar Shading (နေရိပ် လုပ်ပေးခြင်း)
Intelligent Buildings အခြေအနေ လိုအပ်ချက်ကို Monitor (စိစစ် တွက်ချက်) ပြီး M&E Systems များကိုအလိုအလျောက် Control (ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်) နိုင်စွမ်းရှိသော Building Automation Systems တတ်ဆင် ထားသည့် အဆောက်အအုံများ
အောက်မှာ M&E Systems တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံ Checklists တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ တစ်ခုစီ ရဲ့ အကြောင်းအရာ အသေးစိတ် ကိုတော့ နောက် အချိန် ရတဲ့ အခါ တင်ပြ ပေးပါ အုံးမယ်။
Indoor Environmental Conditions အထက်မှာ တင်ပြခဲ့ တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ Temperature, RH, Acoustic Criteria, Cleanliness and Vibration Criteria တွေ ကိုသေချာ စစ်ဆေးဘို့ လိုပါတယ်။
System Composition and Heating / Cooling Distribution ဘယ်စနစ် တွေသုံးမှာလဲ စစ်ဆေး နိုင်ဘို့ပါ။
Water-Cooled / Air-Cooled
Heating / Cooling Distribution:
VAV (Variable Air Volume) / CAV (Constant Air Volume) Systems
Decentralized Systems အများစု ကတော့ DX Systems: DX unit တွေပါ၊ ဒီ တွေမှာ Compressors တွေပါရှိ တတ်တာမို့ Unitary Systems လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ အများအားဖြင့် Air-Cooled Condensers တွေ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အချို့ကတော့Water-Cooled လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Cooling Only Units (လေအေးပေးစက် သက်သက်) တွေ ဖြစ် နိုင်သလို ရာသီဥတု အရလိုအပ်ရင် အပူရော အအေးပါ ပေးနိုင်တဲ့ Heat-Pumps တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပါဝင် နိုင်တာ တွေ ကတော့
Windows Units: (အသံဆူ လို့ ခုခေတ် အိမ်တွေမှာ သိပ် မသုံးတော့ ပါဘူး။)
Split Systems (Split FCUs) တွေ၊
Variable Refrigerant Flow Muti-Split Units တွေ
Packaged Terminal Air Conditioners (PTACs) လား
Water-Cooled လား စသည်စသည်။
DCS / DHS : District Cooling / Heating System တွေရ နိုင်လား။
Central Plant Location
Capacities and locations, etc. စွမ်းအား ကဘယ်လောက် ဆို အရွယ် က ဘယ်လောက်ရှိမယ် ဆိုတာ နဲ့ ဘယ်မှာ ထားမယ် ဆိုတာ၊ အစရှိသည်။ ...
အပူတွေ ကို မှုတ်ထုတ်ဘို့ လိုအပ် တဲ့ Cooling towers or condensers (water, air-cooled) တွေ ဘယ်နေရာမှာ ထားရမယ် ဆိုတာ။
Ventilation and exhaust လေကောင်းလေသန့် ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Natural Ventilation သဘာဝ အတိုင်း ရနိုင်မှာလား။
Outside air rate (minimum, 50% or 100%); ပြင်ပလေ ဘယ်နှုန်း နဲ့ ထည့်ပေးရမလဲ။
Exhaust Air Rate အထဲကနေ ဘယ်နှုန်း နဲ့ စုတ်ထုတ်ရမှာ လဲ။ (အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း၊ စက်ခန်း၊ မီးဖို၊ စားသောက်ဆိုင်ခန်း၊ ကော်ရစ်ဒါ တွေ အပြင် စပါယ်ရှယ် လိုအပ် တဲ့ Toxic Gas, Acid/ Alkaline/ Solvent Exhaust, Hospital/Bio Exhaust တွေ။
Fresh / Exhaust Air Treatments လိုအပ်ချက်တွေ။ Hazardous Exhaust တွေ ပါဝင်လာရင် တော့ Treatment / Filtering / Sterilization တွေအပြင် Handling Protocol ကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Automation BAS or BMS,
Monitor / Control Requirements & Strategy
BMS Points Schedule
Field Instruments, Hardware Equipments, Cabling
Communication Protocol, Software Modules
Water source (potable)
Water source (non-potable)
Usage (sanitary; irrigation), etc.
System Supply Pressure Zones
Tank Location, Material (RC / FRP/ GI etc.) & Sizes (capacities)
Pump Location, Purpose (Transfer / Booster), Type (Centrifugal (In-Line, Split-Case, Single/Multi-Stage) & Capacities (Flow rate & head)
Usage Points : Locations, Pressure required and Demand, etc.
Hot Water Generators : Electric, Steam Powered, Heat Pump or heat exchangers
Storm, sanitary, sewage treatment (on site or in building),
Public sewers, etc.
Drainpipes, sumps, pumps, discharge, location, etc.
Soil, waste and venting, etc.
Fire Fighting / Extinguishing Systems
Fire hose (hose-reels) and
Standpipe (Wet / Dry Riser),
Portable Fire Extinguishers,
Automatic Sprinkler Systems, Hazard Classes & Types,
Gas Suppression Systems etc.
Lake, pond, Tanks,
Tank Material (RC / GRP etc.)
Location, and Capacities
Single or cascading,
energy (gas, diesel, or electric), etc,
Thermal (Heat) and smoke detectors, etc.
Fire and smoke containment (*)
building compartmentation (by zone or by floor)
Smoke exhaust, floor pressure controls,
stair pressurization, etc."
Fire Annunciation (Public Address)
Automatic Notification to Fire Department, etc.
Equipments & Utilities Matrix
Utility Consumption Rates of each equipments
Systems Composition (Systems / Equipments) Required
Equipments Hook-Up Scope
Checklist of Electrical Systems
Normal power source
Utility or on-site power (capacity, phase, and voltage)
on-site generation, etc.
Primary or secondary voltages
panels and substation locations
ceiling conduit network,
Critical equipment load,
emergency lighting. etc.
Critical building loads
power source (batteries. UPS, etc.)
Critical building loads, power source (batteries. UPS, etc.)
Power for building equipment
Vertical Transportation (Elevator, escalators), etc.
Major lighting systems
Light sources and
method of mounting (surface, lay-in, pendent), etc.
layout and controls, etc.
critical and emergency, etc.
Architectural expression and
building features, etc.
Exterior lighting Site, landscape, building facade, security, etc.
facsimile, modem, etc.
music systems, etc.
Audio video (A/V)
Radio, TV and signal distribution systems, etc.
Satellite dishes (.)
diameter orientation and location, etc.
A/V Transmission towers
Time and signal
Time and signal Clock and program systems, etc
Interface with FP, HVAC, BAS, etc.
Security systems (.)
interface with HVAC, elevators, fire protection, lighting, security, etc.
Numerous specialty systems
Posted by pyaephyonaing at 2:56:00 PM
( õ õ )
THANK YOU FOR YOUR TRIP
"You do not know, you cannot know, what it means to have eyes inaworld in which everyone else is blind. I am notaking, no, I am simply the one who was born to see this horror. You can feel it; I can both feel and see it."
MYANMAR ZAWGYI FONT / ဇော်ဂျီမြန်မာဖောင့်
you can play the song below
This Music Player was created by pyaephyonaing"
myspace fetishflash mp3 playersmyspace music
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း နဲ့ MEP Systems
MEP Systems ဆိုတာ ဘာတွေလဲ။ (What are Building MEP ...
Building M&E Systems တွေရဲ့ Scope (နယ်ပယ်အတိုင်းအတ...
M&E vs Space Planning (နေရာ လျာထားသတ်မှတ်ခြင်း)
ကုန်ကျစရိတ် ပေါ်အကျိုးသက်ရောက် မှု (The Impact on Co...
High-Rise Buildings တွေအတွက် M&E ဒီဇိုင်း
MEP Basic Calculations: Pipe & Duct Sizing
Automatic Control Systems in Buildings
Green Certifications (USGBC's LEED / Singapore Gre...
USA: EIT (Engineer-In-Training) and FE Exam
Initial Ground Support
hello feed us ....with using click
ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်အပါအ၀င် အသံတော်+စာသား
တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ဘုရားကြီး အသံတော်+စာသား
မြန်မာစာ လက်ကွက်မသိပဲ မြန်မာစာ ရိုက်ချင်သူများအတွက် (၁)
မြန်မာစာ လက်ကွက်မသိပဲ မြန်မာစာ ရိုက်ချင်သူများအတွက် (၂)
I AM A HAMSTER ... GIVE ME A FOOD